(1)234567 8910 next> last>>
Jeon Ji-hyeon Pregnant For The First Time In3Years Since Marriage
Posted By - Ko Ko - July 25, 2015
မင်းသမီး Jeon Ji-hyeon ကိုယ်ဝန် သုံးလ ရှိပြီးဟု ဆိုခြင်း။
မင်းသမီး Jeon Ji-hyeon မှာ ကိုယ်ဝန် ၃လ ရှိနေပြီး ဟုသိရ ပါတယ်၊ အိမ်ထောင်သက် ၃နှစ် တွင် ပဋ္ဌမဆုံး ဟု ဆိုပါတယ်။
ဒီအကြောင်း ကို ၂၂ ရက်နေ့က သူမရဲ့ အေဂျင်စီမှ ကြေငြာ ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ The Assassination အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် ဖွင့်ပွဲ နဲ့ တိုက်ဆိုင် နေလို့ အခုမှ အသိ ပေးခြင်း ဖြစ် ပါတယ်။ သူ့မ ခင်ပွန်း နဲ့ မိသားစု ကတော့ အလွန် ဝမ်းသါနေ ကြပါတယ်။
ခင်ပွန်းသည် Choi Joon-hyeok မှာ လုပ်ငန်းရှင် တဦးဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော် Hanbok designer Lee Yeong-hee ရဲ့မြေး ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ထပ်ပြီး နောက်မှာ၊ The Thieves, The Berlin File နဲ့ My Love from the Star စတဲ့ အနုပညာ လုပ်ငန်း တွေနဲ့ ဆက်ပြီး နာမည် ရခဲ့ ပါတယ်။
သူမရဲ့ နောက်ဆုံး ရုပ်ရှင် The Assassination ကို July 22 နေက ရုံတင်ခဲ့ ပါတယ်။
Source: Jeon Ji-hyeon Pregnant For The First Time
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/534/jeon-ji-hyeon-pregnant-for-the-first-time-in-3-years-since-marriage
Lee Byeong-Heon And Lee Min-jeong Are In Relationship
Posted By - Ko Ko - September 9, 2012
Lee Byeong-heon talks about his lover
Lee Byeong-heon's relationship reported in Japan
Actor Lee Byeong-Heon and actress Lee Min-jeong
မင်းသား Lee Byeong-heon ဟာ မကြာမှီက သူပါဝင် သရုပ်ဆောင် မဲ့ Gwanghae လို့ အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ သို့တက်ရောက် လာပါတယ်။
သတင်းထောက် များဟာ Gwanghae ရုပ်ရှင် အကြောင်း မမေးကြ ပဲ၊ သူနဲ့ မင်းသမီး Lee Min-jeong တို့ တွဲနေ ကြတဲ့ အကြောင်း ကိုပဲ ဝိုင်းမေး ကြပါတယ်။
မင်းသားက သူတို့ တွဲနေကြ တာမှန်ကြောင်း ဝန်ခံသွား ပါတယ်။ မင်းသားက ၄၂ နှစ် ရှိပြီး၊ မင်းသမီးက သူ့ထက် ၁၂ နှစ်ငယ် ပါတယ်။
ငယ်ရွယ်တဲ့ ချစ်သူဟာ သူ့လို အသက် ကြီးသူနဲ့ တွဲနေ ရတာ ကိုစိတ် မကောင်း ဖြစ် မိကြောင်း၊ သူမဟာ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် ရင့်ကျက်ကြောင်း၊ သူမနဲ့ အတူရှိ တဲ့အချိန် တွေဟာ ပျော်စရာ ကောင်းကြောင်း မင်းသားက ပြောသွား ပါတယ်။
နောင်ဆိုရင် ဖုံးကွယ် စရာ မလိုပဲ၊ လူသိ ရှင်ကြား တွဲခွင့် ရပြီး ဖြစ်လို့ ကျေနပ် မိကြောင်း ကိုလည်း မင်းသားက ထည့်သွင်း ပြောကြားသွား ပါတယ်။
Summary - All eyes were on Hallyu actor Lee Byeong-Heon when he attendedapress conference for the movie [Gwanghae] yesterday atapub in Jongno District, central Seoul. Despite the fact that the event was staged to promote the movie co-starring actors Han Hyo-joo, Ryoo Seung-yong and Kim In-kwon, reporters bombarded Lee with questions about his girlfriend, Lee Min-jeong. I owe so much to her - Lee said. We can talk for hours, and she is also the only woman who can make me laugh. The 42-year-old star did add that their 12-year age gap was not ideal. I do feel bad for her that she is dating someone so much older - he said. But he added that Lee Min-jeong was wise beyond her years and had recently impressed not only him but the cast and crew of his movie by sending them homemade lunch. In regards to making the public announcement just last month, Lee said it has made life easier. It is nice to think that we do not have to hide our relationship - he said.
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/533/lee-byeong-heon-and-lee-min-jeong-are-in-relationship
Rain Endurance Test For R2B - RETURN TO BASE Shocks Viewers
Posted By - Ko Ko - August 26, 2012
Rain's endurance test for R2B: RETURN TO BASE shocks viewers
ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ Rain ​
အဆိုတော် မင်းသည် Rain ဟာ မကြာမှီ က ဂျက်လေယာဉ် pilot များဘဝ နောက်ခံ R2B လို့အမည် ပေးထားတဲ့ ရုပ်ရှင် ရိုက်ခဲ့ ပါတယ်။ ၄င်းကားမှာ ပါဝင်တဲ့ သရုပ်ဆောင် များဟာ ခံနိုင်ရည် စမ်းသပ်မှု endurance test ပြုလုပ် ခဲ့ကြရ ပါတယ်။
A typical 'G Force' endurance tester
စမ်းသပ်မှု တစ်ခုမှာ Rain ဟာ 9G (ကမ္ဘာ့ဆွဲအား ၉ဆ) အထိ ခံနိုင်ရည် ရှိတာကို တွေ့ရှိခဲ့ ရပါတယ်။ 6G ခံနိုင်ရင် fighter jet ပေါ်တက်ခွင့် ရပါပြီး။ 6G အောင်ပြီး နောက်မှာ 9G test လုပ်ချင် တယ်လို့ Rain က တောင်းဆို ခဲ့လို့ ခွင့်ပြု ပေးခဲ့ ပါတယ်။ 9G ကိုလည်း အောင်မြင် ခဲ့ပါတယ်။
Movie R2B - Retuen to Base
လက်ရှိ jet pilot တွေထဲ မှာပင်၊ 1% လောက်ပဲ 9G test အောင်မြင် ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ 6G ရော 9G ပါ တစ်ရက်တည်း စမ်းသပ် ခံခဲ့တာ ကိုးရီးယား လေတပ် ရာဇဝင် မှာဒါ ပထမ ဦးဆုံး ပဲလို့ သိရ ပါတယ်။
ဒုတိယ မင်းသား Yoo Joon-sang ဟာ 6G ကိုစမ်းသပ် ရာမှာ၊ ပထမ ၂ ကြိမ် မေ့မျော သွားခဲ့လို့ ကျရှုံး ခဲ့ပါတယ်။ ၃ ကြိမ်မြောက် ကျမှ အောင်မြင် ခဲ့ပါတယ်။ R2B (Return to Base) ရုပ်ရှင်မှာ သရုပ်ဆောင် မှုပီပြင် စေဖို့၊ သရုပ်ဆောင် တစ်ဖွဲ့ လုံးကို၊ လပေါင်း များစွာ စစ် training ပေးခဲ့တယ် လို့သိရ ပါတယ်။
Summary - The video clip of Rain's 9G pressure training is becomingahot topic online. To prepare for production, the cast of R2B: Return to Base all underwent endurance tests to prevent symptoms that may be experienced from too much acceleration force in high-speed jets, including loss of consciousness and change in vision. The test measures G-force, which isaunit used to measure the force thatahuman body is subjected when accelerated. A typical person can withstand about 5G before losing consciousness. WearingaG-suit, Rain shocked his costars and military trainers alike when he challenged himself with the pressure tests. Said his costar Kim Sung-soo, "Once you past the 6G test, you're ready to boardajet. Rain was the first one out of all of us to pass the 6G test". He continued, "You're pretty much set once you pass the 6G test. But Rain insisted that he do the 9G pressure test as well. He passed. Passinga9G test is something that only the top 1% of jet pilots can do, and you certainly don't doa6G and 9G test all in one day. The air force said that this is the first time anyone has done that". Rain's costar, Yoo Joon-sang, succeeded in the 6G test after fainting during the first2tries. In order to get into character and into shape for the shooting of R2B: Return to Base, the entire cast underwent training periods that lasted from4months to 1 year.
2 comments submit comments
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/532/rain-endurance-test-for-r2b-return-to-base-shocks-viewers
The Thieves Stealing The Show In Korea
Posted By - Ko Ko - August 13, 2012
Korean action movie "The Thieves"
ပြသဆဲ ကိုးရီးယား ရုပ်ရှင် The Thieves မှာ ပရိသတ် အလွန် အားပေး နေပါ ကြသည်။ 25 July မှ 10 Aug အတွင်း လက်မှတ် 8,098,952 (ရှစ်သန်းကျော်) ရောင်းချခဲ့ ရပြီး ဖြစ်ပါသည်။
နောက် ၂ ရက် စနေ နှင့် တနင်္ဂနွေ ကုန်လျင် ဆယ်သန်ကျော် ရောင်းရမည် ဟု ဟောကိန်း ထုတ်နေ ကြပါသည်။
လက်မှတ် ရောင်းချ ရမှု စံချိန်မှာ တစ်ချိန်တည်း ပြသလျက် ရှိသော နာမည်ကျော် ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင်များ ဖြစ်ကြသည့် The Avengers နှင့် The Dark Knight Rises တို့ကိုပင် ကျော်တက်သွား ပါသည်။
The Thieves ရုပ်ရှင် ပွဲပေး စဉ်ကပင် နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင် Jeon Ji-hyeon, Kim Hye-soo, Kim Yoon-seok and Lee Jeong-jae စသူတို့ ပါဝင် သောကြောင့် လူအများ အာရုဏ်စိုက် ခံခဲ့ရ ပါသည်။
ဇာတ်လမ်းမှာ နာမည်ကြီး သူခိုးကြီး ၁၀ ဦး Macau တွင် စုပြီး US$ 20 million တန်စိန်တုံးကြီး ခိုးကြသည့် အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။
Source Link : The Thieves stealing the show in Korea
Summary - Korean action movie 'The Thieves' has setabox office record again with more than eight million viewers, becoming the 10th-most-popular Korean movie of all time as of yesterday.According to statistics released by the Korea Film Council yesterday, the movie has been seen by 8,098,952 moviegoers since its release on July 25. Many industry watchers say that 'The Thieves' will likely attract 10 million viewers around next week withcurrent pace of ticket sales. The film overtakes Hollywood super hero film 'The Avengers' as the most-watched movie of this year, raking in more than half of the local box office revenue. It has also surpassed Hollywood blockbuster 'The Dark Knight Rises'.'The Thieves' garneredalot of attention before its release as the action-thriller stars A-list actors and actresses Jeon Ji-hyeon, Kim Hye-soo, Kim Yoon-seok and Lee Jeong-jae. The plot centers onagang assembled in Macau by legendary thief Macao Park (Kim Yoon-seok) to steala$20 million diamond.'
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/531/the-thieves-stealing-the-show-in-korea
BoA Confesses To Son Hyeon-joo Ache
Posted By - Ko Ko - August 9, 2012
BoA Confesses To Son Hyeon-joo-ache
အဆိုတော် BoA က မင်းသား Son Hyeon-joo ကို တအား ကြိုက်နေ ပါတယ်လို့ ထုတ်ဖေါ် ပြောသွား ပါတယ်။
BoA က "မင်းသား Son Hyeon-joo က ကျွန်မ အသဲနှလုံး ယူသွား ပါပြီး" လို့ Twitter ထဲမှာ ရေး ခဲ့ပါတယ်။
Actor Son Hyeon-joo
Son Hyeon-joo က မကြာခင် က ပြလို့ ပြီးသွားတဲ့ "The Chaser" လျှို့ဝှက် သဲဖို စုံထောက် ဇာတ်လမ်တွဲ ထဲက ခေါင်းဆောင် မင်းသားပါ။
BoA က သူမဟာ drama mania (ဒရာမာ သရဲ) ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ခုကို စကြည့် မိလို့၊ ကြိုက်သွား ခဲ့ရင်၊ အစအဆုံး တပိုင်း မကျန် ကြည့်ရမှ ကျေနပ် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Details of 'The Chaser'
Also known as: Father's War
Episodes: 16 +2Specials
Broadcast period: 2012-May-28 to 2012-Jul-24
Drama rated 22.6%
Kim Sang Joong as Kang Dong Yoon
Source Link : BoA Confesses To Son Hyeon-joo-ache
Summary - BoA is aching for Son Hyeon-joo. Singer BoA has completely fallen for actor Son Hyeon-joo. She posted on Twitter on the 13th, Son Hyeon-joo has taken my heart! He's the best!"… Netizens say, "I feel you!", "I agree with your aching for Son Hyeon-joo!", "She'sadrama mania!" and more. Meanwhile, BoA revealed that she wasadrama mania as she has to watch the entire series ofadrama once started.
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/530/boa-confesses-to-son-hyeon-joo-ache
Rendering time 0.0001 sec **
2b9bc59d9070fa834fedecc450994131 - January 23, 2018 - 11:44:45 am